November 5, 2018 | Kichuu
Guutoo Giddaatti poolisoonni lama ajjeefaman (bbc) —Godina Wallagga Bahaa aanaa Guutuu Giddaatti dhukaasa banameen poolisootni Oromiyaa lama ajjeefamuun namni biraa tokko madaa’e. Manneetiin qonnaan bulaa naanicha gubachaa jiraachuus jiraattotni naannichaa BBC’n dubbise himaniiru. Kaleessa ganama [Read More]
Lelisa Desisa of Ethiopia wins men’s title at 2018 NYC Marathon
Naqamtetti kan waraanni wayyaanee amma rukutte du’aaf jiraa gidduu jira. Dirmannaa barbaada! OMN: ODUU SADAASA 5, 2018 “Naqamtee Magaalaan Naqamtee dirre waraanaa taatee jirti sa’aati ammaa kana dhukaasa ergamtoonni mootummaa garbonfataa wayyaanee banteen namoonni sadii [Read More]